Daafaca Uu Tababare Zidane U Arko Bedelka Mudada Dheer Ee Kabtan Ramos & Kulanka Ku Qasbay Inuu Jeclaysto Ciyaartiisa - Gool24.Net
Daafaca Uu Tababare Zidane U Arko Bedelka Mudada Dheer Ee Kabtan Ramos & Kulanka Ku Qasbay Inuu Jeclaysto Ciyaartiisa
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa go’aamiyay daafaca uu ka dhigayo bedelka mudada dheer ee kabtanka kooxdiisa Sergio Ramos oo ku jira sanadihii ugu dambeeyay ee waayihiisa ciyaareed.
Zidane ayaa jagadaas u doortay daafaca dhexe ee kooxda RB Leipzig ee Dayot Upamecano oo kamida da’yarta ka ciyaarta qaarada Yurub kuwooda aadka loo qiimeeyo.
Upamecano ayaa indhaha caalamka xaday kulankii ay dhawaan kooxdiisu guusha 2-1 ka ah ee Champions League ahayd ka gaadhay Atletico Madrid markaas oo lood doortay xiddigii ugu fiicnaa ciyaartaas.
Wargeyska AS ayaa hadda sheegaya in qaab ciyaareedkii 21 sano jirkaasi uu ka sameeyay kulankaas Atletico Madrid uu noqday mid uu aad ula dhacay Zidane taas oo ku qancisay in Upamecano uu daafaca saxda ah u noqon doono Real Madrid.
Si kastaba, qorshaha Real ayaan ahayn inay suuqa xagaagan 2020 ku bixiso lacago badan taas oo ka dhigan inay ilaa xilli ciyaareedka dambe sugi doonaan si ay u bixiyaan 41-ka Milyan ee Pound ee heshiiskiisa lagu jabin karo.
Los Blancos ayaa saxeexa Dayot Upamecano dagaal culus ku geli kara suuqyada soo socda maadaama oo ay jiraan kooxo badan oo waaweyn oo iyaguna xiiso u muujinayaa.
Upamecano ayaa mustaqbalkiisa dhaw u huray RB Leipzig horraantii xilli ciyaareedkan kaddib markii uu u saxeexay heshiis cusub oo ilaa 2023 gaadhsiisan.
Hal war oo u wanaagsan dhammaan kooxaha xiisaynaya saxeexa da’yarkan ree France ayaa ah in lacagta heshiiskiisa lagu jabin karo 54 Milyan oo Pound laga soo dajiyay kaddib heshiiskan cusub oo lasoo gaadhsiiyay 41 Milyan oo Pound.